Igama elithi "caramel" ngesiLatini - "umoba". Kungenzeka ukuthi amnandi mass okunamathelayo ezinsukwini ubudala itholakele "igolide white". Ngakho-ke uma eyaziwa ngokuthi umoba. Manje abantu sebengakwazi by ekushayeni izinto zokusetshenziswa, kukhishwe lokhu sidakamizwa imikhiqizo ehlukahlukene. Kodwa umthombo oyinhloko ukukhiqizwa namanje umoba. Ajwayelekile njengoba thina umkhiqizo amnandi atholakala kuyi-sugar beet kuyinto 40% welinani selilonkhe akhiqizwa emhlabeni. Kulesi sihloko uzofunda indlela yokwenza caramel kusuka ushukela. Sitshele indlela yokuyisebenzisa hhayi kuphela njengoba emzini ushokoledi, kodwa futhi kahle umphelelisi nama-dessert.
Izimfihlo ekulungiseleleni isiraphu nekharameli futhi caramel
Caramel wenza atholakala kuyi-sugar isiraphu. Isakhiwo yalolu ketshezi sishintshwe Ukushisa, breaking phansi fructose kanye glucose. Futhi kuba lowehlukile ukunambitheka. Ukuze inqubo caramelization, izinga lokushisa rose akazidluli ezivunyelwe (160 degrees), ukwengeza amanzi kancane (15-20%). Indlela yokwenza caramel atholakala kuyi-sugar kwesokudla ukungaguquguquki, umbala kanye ukunambitheka?
Imfihlo main - hhayi overheat le isiraphu ukuvimbela overcooking. Lapho abilisiwe caramel ku ukukhiqizwa kukashukela, lokhu inkinga isixazululekile kalula. Kukhona ama-thermometer esikhethekile ukulawula lokushisa. Ngaphandle isiraphu kufanele nithele at ukushisa low imizuzu 30-40. Ngakho-ke, senza candy ekhaya, qiniseka ukusebenzisa ekulungiseleleni isitsha thick-ngodonga.
Eyesibili imfihlo - Ukupholisa okusheshayo. Kuze kube yimanje, lo isiraphu kokuqendwa kuthululwe phezu kwetafula bese ukuvimbela spoon kuphole. Kancane kancane engeza ukunambitheka wokuqala, bese, cishe chilled isisindo udayi. Wabe esebeka phezu isikhunta ukuze solidification ephelele. Ngakho-ke kuvela candy.
Imfihlo yesithathu - indlela yokwenza caramel atholakala kuyi-sugar eyayigcwele ngaphakathi. Zama ngesikhathi ethela isiraphu hot formochkam enze izithelo ungqimba. Kukhona enye indlela - ahlukaniswe ku uhlomo, isib, asithena, bese elicwiliswe ashisayo caramel isiraphu.
imfihlo Okwesine - okwenza "ofaka" elimnandi kophudingi. Uma ushukela uncibilike, engeza amanzi esikhundleni juice noma ubisi e ngesilinganiso kancane emikhulu. Bese - ibhotela kancane. Phela lokhu nje abilisiwe, uphendulela elimnandi ingxube okunamathelayo, enhle njengoba umhlobiso kuya ikhekhe noma ice cream.
Recipe: indlela yokwenza caramel atholakala kuyi-sugar ngaphezu dessert
Mnene dessert French ingenziwa ngezindlela ezahlukene. Kepha ngeke ziswele into ngaphandle ungqimba caramel phezu ukhilimu emangalisayo.
Ukulungisa ukhilimu kufanele: 300 ml ukhilimu, 30% fat, sachet vanillin, 4 isikhuphasha, 3 wezipuni ushukela, 100 g okusajingijolo.
Ukuze caramel: 100 g ushukela.
Phehla amaqanda izikhupha noshukela ibe froth ezimhlophe, hlanganise ukhilimu afudumele vanilla. Beka imbiza kolunye esitsheni ngamanzi abilayo. Ukuvusa njalo, ukupheka ukhilimu cishe 5 imizuzu kuze kube uqweqwe. Khona-ke walala phezu raspberries formochkam. Thatha ugqoko ezijulile, okuyinto indebe kuphekwe ukhilimu, futhi uthele amanzi kuyo kuze kube maphakathi isikhunta. Bhaka kuhhavini osuke usushisa kakade at 180 degrees. isikhathi Ukupheka - 10 imizuzu. Uma selehlile, indawo esiqandisini ubusuku.
Ushukela kancane chaza pan obukhulu. Lokhu kungathatha imizuzu engu-15 Thela ketshezi isiraphu caramel phezu creme brulee. Ake cool futhi sigcine endaweni epholile.
dessert French ulungile!
I-Republic of Benin umlando labantu